Qiimo-dhaca shilinka oo sababay in sarrifleyaashu ay shaqo-la’aan noqdaan - Radio Ergo
Qiimo-dhaca shilinka oo sababay in sarrifleyaashu ay shaqo-la’aan noqdaan
Sarriflayashii ka howl gali jiray suuqa sarrifka ee Garowe oo wajahaya nolol adag/Keydka sawirada/Ergo
(ERGO) – Farxaan Ayaanle oo ah 32 jir wuxuu la daalaa-dhacayaa maareynta nolosha qoyskiisa kaddib markii ganacsigiisa sarrifka lacagaha uu ka xirmay bishii Maarso ee sanadkaan. Wuxuu ka mid ahaa 70 nin oo lacagaha ku sarrifi jiray suuqa magaalada Garowe, kuwaas oo ay saameysay joojinta isticmaalka shillin Soomaaliga.
Dadka ganacsatada ah ee ku nool magaalada Garowe ayaa joojiyay qaadashada lacagta Soomaaliga kaddib markii la isla dhex maray in suuqa ay ku jirto lacag si sharci-darro ah loo daabacay. Ganacsatada iyo dadka deegaanka ayaa hadda wax ku kala iibsada lacagta doollarka, taasi oo la isugu diro telefoonka gacanta. Waxay si weyn u saameysay dadkii sarrifka lacagaha ka shaqeysan jiray.
“Faa’iidada yar ee aan ka heli jiray sarrifka waxaan ku biili jiray qoyskayga. Waxaan ahaa sarrifle muddo saddex sano ah, waxayna ahayd shaqada keliya ee aan si fiican u aqaannay. Laakiin hadda, lix bilood ayaan shaqo-la’aan ahay,” ayuu yiri Farxaan oo macaamiishiisa ka qaadan jiray lacagta shillin Soomaaliga ah isagoo ugu baddeli jiray doollarka.
“Jidadka ayaan ku qubnay lacagteenna Soomaaliga maaddaama meel kasta laga soo diiday.”
Farxaan oo ah aabbaha saddex carruur ah, waxay nolosha ku qasabtay in xaaskiisa iyo labo ka tirsan carruurtiisa uu u raro tuulada Xamuur, oo ku taalla bariga Nugaal maaddaama uu awoodi waayay bixinta kirada guri labo qol ah oo ay ka deggenaayeen Garowe.
Wiilkiisa oo fasalka lixaad ka dhigta iskuul ku yaalla Garowe ayuu sheegay inuu dulsaar ku yahay qoys ay qaraabo yihiin oo ku nool magaalada. Qoyska ayaa ka bixiya lacagta waxbarashada.
Farxaan ayaa sheegay in khasaaradii soo gaartay markii shilin Soomaaliga la diiday ay curyaamisay dhaqaale ahaan. Wuxuu tilmaamay in wax lacag ah oo keyd ah uusan meel dhigan isla markaana aysan jirin qof lacag amaahiya si uu ganacsi kale u billaabo. Wuxuu u jeediyay mas’uliyiinta inay xal u helaan dhibataada diidmada shillin Soomaaliga ee haysata qoysas badan.
“Waxaan ka rabnaa dowladda inay dib u soo celiso lacagtii shilinka Soomaaliga ahayd. Toban kun oo shilin Soomaali ah ayaa maalin dhan lagu quudin jiray qoys dhan, laakiin hadda qiimo ma leh [maba shaqeyso]. Dadka oo dhan ayaa dareemaya xanuunka dhibaatadan!” ayuu yiri Farxaan.
Daa’uud Cali Xersi oo ah 27 jir, sidoo kale ka shaqeysan jiray sarrifka lacagaha ayaa sheegay in qoyskiisa oo saddexda waqti dabka shidan jiray uu hadda awoodi la’ yahay hal waqti. Wuxuu maalinkii faa’iido ahaan u heli jiray shan ilaa iyo toban doollar. Lacagtaan ayuu qoyskiisa bishii mar ugu soo qaadi jiray raashin ku filan oo bille ah. Balse haatan waxay ku tiirsan yihiin caawimaad ay ka helaan deriskooda iyo qaraabada.
“Aabbe wax laga sugayo ayaan ahay. Gurigayga iskama fadhin karo, subax walbo suuqa ayaan aadaa siddeedda subaxnimo si aan u arko bal inaan kaalmo ka heli karo asxaabteyda, balse waxaan galabkii soo laabtaa anigoo gacmo-maran,” ayuu yiri Daa’uud.
“Waxaan haystaa laba carruur ah oo u baahan caano, mana u awoodo. Wallahi, rafaad ayaan isaga noolnahay.”
Cabduqaadir Saciid Daahir oo ah agaasimaha waaxda horumarinta shillin Soomaaliga ee wasaaradda Ganacsiga iyo maalgashiga ee dowlad-goboleedka Puntland ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in xafiiskiisa uusan wax ka qaban karin arrinta soo celinta shillin Soomaaliga maaddaama xilka daabicista iyo ilaalinta lacagta ay u kali tahay dowladda federaalka ah. Wuxuu ku eedeeyay dowladda inay dayacday kaalinteeda, kuna guul-darreysatay ilaalinta lacagta qaranka.
Qashinka laga fogeeyo magaalada oo dhibaato ku haya xoolo-dhaqatada hareeraha Cadaado
Boqollaal arday oo waxbarasho-la’aan looga cabsanayo markii iskuulladooda ay ka go’day taageero ay ku tiirsanaayeen
Haweenka ku barakacay Luuq oo gargaarkii ay heli jireen uu saameeyay Koofid-19 oo ku biiraya ganacsiga seyladda
Qoysas ku barakacay Beledweyne oo laga caawiyay inay dhistaan guryo cariish ah
Raashinka mar kale la dhimay ee xeryaha Dhadhaab oo sii adkeeyay xaaladda qaxootiga
Nin cod-baahiye ogeysiisyada iyo baafinnada ku gaarsiiya dadka Luuq
Cunno-yari ka jirta deegaanka Af-urur oo ay saameeyeen daadad ka dhashay roobka
Biyo-yarida ceelasha degmada go’doonsan ee Xudur oo saameeyay dadka deegaanka iyo xoolo-dhaqatada